Kuunganidza Zvipo: Mvura kune vose - Toolsdecuisine.com
Kuunganidza Zvipo: Mvura Yevose
25 May, 2018 • mutsa • mutsa • muunganidzwa • mipiro • ea • kunwa mvura • eaupourtous • vanhu
Vakawanda vedu hatizivi kuti zvinorevei chaizvo kuva nenyota. Tine mvura yakawanda yekunwa - kunyange mvura iri mudzimba dzedu yakachena!
Asi vanhu vakawanda munyika havakwanisi kugadzikana. Zuva rimwe nerimwe pamusoro pe1 400 vana vanofa nehosha dzinokonzerwa nemvura isina kunaka uye kuchenesa utsvina. Icho chokwadi hachifaniri kunge chiri mu 2018 ...
Kune mhinduro dzakajeka dzakadai semiti yakatsvaira, vatsigiri vemazuva uye BioSand filters dzinobatsira kupa mvura yakachena kumarudzi ose munyika. Ndizvo chaizvo izvo sangano rinoita CharityWater.
Nzvimbo yako www.outilsdecuisine.com yakasarudza kutanga purogiramu yekubhadhara mari yekubatsira CharityWater kupa mvura yakachena yekunwa kune vose kuburikidza nezviito zvavo.
Ini ndinopa rubatsiro ikozvino nekudhonza pano (ipapo pabhokisi "DONATE").
Chii chinobatanidza pakati pe Outilsdecuisine.com uye ichi rudo?
Kwete link per se (kwete kubatana), asi munhu wese anoziva kuti kubika mvura kunokosha!
Kana kusuka cookware wako, kuti vakuchidzire zvimwe zvokudya zvako (edza kubika Pasta mupoto isina chinhu!), Kana nokuda michero nemiriwo pachavo, izvo pasina mvura, ita inogona kusundira ...
Ndizvo vanhuwo pfungwa pakati mvura uye Website yedu, asi zviri pachena kuti kudiwa kwemvura kunopfuura kuti, zviri nyore zvakakodzera kuti upenyu, kuti urarame (kumbira Mike Horn!). Mvura yokushambidza, mvura yekubika, mvura yekunwa, uye kunyanya mvura yekunwa kudzivisa zvirwere zvakawanda ...
Zvinokwanisika kupona pasina kudya asi zvisinei hazvibviri kurarama pasina kunwa! Nemhaka yokuti muviri haugoni kukurira huwandu hwemazuva e3 kana uchitorerwa mvura. Tinorasikirwa nemamiriyoni e2 emvura zuva rega rega kuburikidza nekutuka, kufema uye kubuda mumvura.
Saka hongu isu tose tine mararamiro akasiyana-siyana, isu tose tine zvikwereti zvekubhadhara, zororo rokuronga vana vedu (kune avo vanogona), isu tose tinofunga nezvese pamusoro pedu uye kune avo varipoteredza tisati tafunga nezvevamwe, asi kunyange kana iwe unogona chete kupa imwe kana maawa mashomanana DO IT! Hazvizoshanduki hupenyu hwako asi huchachinja hupenyu hwevanhu vazhinji kune imwe nzvimbo munyika ...
100% mari ichashandiswa kuvaka mvura mapurojekiti, uye pavanenge vapedza, CharityWater titumirei mapikicha uye GPS anoona saka tinogona kuona kuti tiri vakabatsira, pamwe chete (kakawanda 21 mwedzi mushure mokuguma kwemushandirapamwe, uye hongu haisi kuvaka zvakadaro sechesi!). Kuti uwane pfungwa iwe unogona kutarisa pamepu yemapurogiramu akatozadziswa (https://www.charitywater.org/our-projects/completed-projects/).
Kana isu kurega maminitsi mashoma pamusoro nyaya yemvura uye fungidzira kuti rimwe zuva tinowana kuti ose ugere panyika ino ine kuwana mvura yokunwa, ipapo uchaona kuti Kuwedzera pakuponesa mupenyu isu kwakachinja nyika zvakadzama: vana vanoenda kuchikoro pane inokwezva mvura vari vana vanogona kuvaka nzanga yakanaka, vachaita kubvumira nyika yavo kutanga, kukura, kunyanya urombo, kubuda, hondo shoma (pachava nenguva yakaipa kune dzimwe zvikonzero) .... izvi (zvisiri nyore) zvingave zvisiri utopi asi zvinokodzera mukana!
Kuti upiwe iko zvino bhura pano uye zvakare "DONATE" bhatani.
Ndinokutendai kuburikidza nokutora nguva yekuverenga ini, ndinokutendai nokuda kwekuedza kupa, ndinokutendai nokuda kwekubatsira kwenyu uye vanhu venyu. Kana uchinge usina kukwanisa kupinda mu euro imwe asi iwe uchiverenga nyaya ino, tapota ugoverei zvakanyanya kune vatinosangana navo, ne email, pane zvekunamata ...
Kana une mibvunzo usanonoka kuvabvunza mumashoko ari pasi apa.
PS: muwandu wemushandirapamwe uyu unofadza kwazvo kuti uedze kubatanidzwa kwako, hazvirevi kutaura kuti kana chinangwa chasvika (zvingave zvakasuruvarisa kuti hachisi ...), tichadzidza kuti tinogona kutanga mamwe mishandirapamwe nezvimwe zvinangwa.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro paCharityWater, inzwisisa basa rayo uye mvura inoshandiswa, tora apa:
Kana iwe usinganzwisisi Chirungu unogona kuvhara ma subtitles icon (pasi nechokurudyi kwevhidhiyo), uye chengetedza pane zvirongwa zvezvirongwa (iri pedyo nemasita)> subtitles> shandura pakarepo> French.
Kuti uwane mvura yePeji yePeji yePurojekiti uye ugoita mupiro, chengeta pano uye ipapo "DONATE" bhatani.
Kamwe iwe rarira pamusoro "ichibvisa", kupinda mari chaunoda kupa (1 $ = 0,85 €), kupinda zita renyu (Full Name), unogona kusiya mhinduro achaonekwa pabasa papeji (Leave a comment). Kana uchida kuramba kusazivikanwa anyatsoronga kutarisa "Hide zita rangu riri rutsigiro papeji," ipapo tinya "ichibvisa" bhatani.
Sarudza nzira yako yekubhadhara (kadhi rechikwereti kana paypal).
Zvadaro gadzai minda inodiwa uye muripire.
← Nyaya yapfuura Nyaya inotevera →
Ndapota cherechedza kuti mazwi anofanira kubvumidzwa asati atumirwa
Gore Idzva Inofara 2019!
Krisimasi inofadza! Chipo kwauri ...
Zvigadzirwa zvekubika zvinotanga kuBulgaria
Cyber ​​Mutevere we latecomers ...
rima guru 2018
gore idzva rinofara
Cyber ​​Muvhuro 2018
chocolate chocolate salon
chocolate saron tours 2018